? => H2SO4 (sulfuric acid) | Isku-dheelitirnaanta isla'egta Kiimikada
? = H2SO4 | Isu dheellitirka Kiimikada
Natiijooyinka 147 helay
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 24HNO3 + FeCuS2 → Cu(MAYA3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18MAYA2 + Fe (MAYA3)3
Waa maxay xaaladda falcelinta ee HNO3 (nitric acid) waxay kaga falcelisaa FeCuS2 (Chalcopyrit)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Cu (NO3) 2 (copper (ii) nitrate) iyo H2O (biyaha) iyo H2SO4 (sulfuric acid) iyo NO2 (nitrogen dioxide) iyo Fe (NO3) 3 (iron (iii) nitrate)?
Dhacdada ka dib HNO3 (nitric acid) waxay la falgashaa FeCuS2 (Chalcopyrit)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 24HNO3 + FeCuS2 → Cu(MAYA3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18MAYA2 + Fe (MAYA3)3
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Cu(NO3)2 (Chalcopyrit)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cu(NO3)2 (copper(ii) nitrate) sida badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2O (Chalcopyrit)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2SO4 (Chalcopyrit)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2SO4 (sulfuric acid) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NO2 (Chalcopyrit)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NO2 (nitrogen dioxide) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Fe(NO3)3 (Chalcopyrit)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Fe(NO3)3 (iron(iii) nitrate) badeecad ahaan?